ब्रत बस्दै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहोस् यी कुरा - Internet Khabar
Home Prawas ब्रत बस्दै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहोस् यी कुरा
ब्रत बस्दै हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुहोस् यी कुरा
व्रतको बेला शरीरमा पानीको कमी हुनसक्ने भएकोले अधिक पानीको सेवन गर्न जरुरी हुन्छ । प्रतिदिन कम्तीमा ६ देखि ८ गिलास पानीको सेवन गर्नु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समेत फाइदाजनक मानिन्छ ।
खानामा अंगुर, लिच्ची, खरबुजा, काक्रो लगायतका फलफुललाई समावेश गर्नुहोस् जसले तपाईको शरीरमा पानीको मात्रालाई बढाउन सकोस् ।
केही घण्टाको फरकमा पानी तथा फलफुलको सेवन गर्नुहोस् । अन्यथा खाली पेटका कारण शरीरमा एसिडिटीको समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ । त्यसैले आˆनो खानामा उच्च कार्बोहाइड्रेटयुक्त खाना जस्तै आलु, सावुदाना लगायतको प्रयोग गर्नु निकै उपर्युक्त मानिन्छ ।
त्यसबाहेक, काजु, किसमिट, पेस्ता लगायतका ड्राइ फु्रटको मनग्य सेवन गरौ । यसले शरीरमा तागत प्रदान गर्नुका साथै तपाईलाई थकान महसुस हुन दिँदैन ।
विहानको समयमा तपाई दूधको साथमा कुनै पनि फलफुलको सेवन गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसबाहेक दूधको साथमा भिजाएको बदाम खानसक्नुहुन्छ।
दिउँसोको समयमा सावुदाना, सेवाईको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । त्यस्तै, आलुको परिकार, रोटी तथा पुरी समेत खान सक्नुहुन्छ।
त्यस्तै, साँझको समयमा ग्रीन टी, तथा मेवालाई तपाई आˆनो खानामा संलग्न गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसबाहेक, चियासित मखाना, काजु पनि सेवन गर्नु सक्नुहुन्छ । यसले तपाईको शरीरमा तागत प्रदान गर्दछ ।
कस्तो सावधानी अपनाउने ?
व्रत बसेको समयमा धेरै चिल्लो, पिरो तथा तारेको खानु स्वास्थ्यका लागि हानीकारक हुनक्छ । यसले शरीरमा कैलोरीको मात्रा बढाउने गर्छ । त्यसैले, कुनै पनि मानिसले व्रत बस्दा प्रोटीन, फैट कार्वोहाइडे्रट, भिटामिन, मिनरल्सयुक्त खानेकुराका साथमा पौष्टिक खानेकुराकोे सेवन गरौ ।
त्यस्तै, मैदा तथा आलुको प्रयोग सकेसम्म कम गरौ ।
त्यस्तै, व्रतका कारण शरीरलाई सुस्त हुन नदिन पनीर, क्रीमयुक्त दूधको सेवन कम गरौ । बरु यसको सट्टा ताजा फलफुल तथा जुसको सेवन गर्नु उपर्युक्त हुन्छ ।
यी रोग भएकाहरुले ब्रत नबसौ
· मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप /हाइपरटेण्सन भएका व्यक्तिले
· भर्खर अपरेशन गरेकाहरुले
· रगतको कमी भएमा अथवा रगत सम्बन्धि समस्या देखिएमा
· मुटु, कलेजो, फोक्सो तथा किड्नी सम्बन्धी रोगबाट पिडितहरु
· गर्भवती महिला
Previous articleविहान उठ्दा स्वास गनाउँछ ? यस्ता छन समाधानका १० उपाय
Next articleमौसमी रोगबाट जोगिन ध्यान दिनुस् यी कुरामा
कुवेतमा पुरिएर दुई नेपाली श्रमिकको ज्यान गयो, एकको उद्धार
भिक्टोरिया क्रस विजेता पुनको नाममा बेलायतमा रेल सेवा सुरु
कोरियामा मेशिनमा च्यापिएर एक नेपालीको मृत्यु
अमेरिकामा नेपाली युवाले गरे समुद्रमा हामफालेर आत्महत्या
मलेसियामा सडक दुर्घटनाबाट एक नेपालीको मृत्यु
रोजगारीका लागि मलेसिया गएका एक युवक तीन वर्षदेखि बेपत्ता
बच्चाको नाममा खोलिएको खातामा फिल्मी शैलीमा आयो करोडौँ रकम, त्यसपछि हुनेसम्म...